Isikhongozeli Phakamisa rim ufikelele isitaki rim kunye engenanto isikhongozeli isiphatho rim Kalmar
Iimfuno isingxobo sokuphakamisa ikhonteyina kunye nokufikelela kwi-stacker rim iphezulu kakhulu, ihlala ithwala umthwalo ophakamileyo (ngaphezulu kweetoni ezingama-20) kunye nesantya esiphezulu, sivavanya uvavanyo oluninzi lweerandi ezingama-13.00 x 33 ezithi ziphume zifikelele kwizitaki kunye nabaphathi bezikhongozeli abangenanto bahlala beqhuba kwiindawo ezilungileyo. Uhlobo lwe-EM phantse luhlala luqhekekile kwindawo yokutshixa kwaye bafumana ubomi obufutshane ukuya ku-3 kutshintsho lwetayara. Iirim ze-EV zisinika ubomi obude ngokunga-5 ukuya ku-6 kutshintsho lwetayara, kwesi siphumo ndicinga ukuba i-EV rim iya kuthwala umthwalo xa iphakame kakhulu kodwa isantya siyakudinga ukugcinwa sicotha kangangoko kwaye umphezulu wokuqhuba ulungile kunokwenzeka. Enye yeenzuzo ze-HYWG kukuba sivelisa zonke izinto ezingqukuva ngathi kubandakanya i-EM kunye ne-EV isitayile, isihlalo sebhedi kunye neringi yokutshixa, sinikezela ngomgangatho othembekileyo kunye noluhlu olupheleleyo lweemveliso ukusuka kwiirandi ezincinci ukuya kwiirandi ezinkulu.
Izinto ze-OTR Rim ubungakanani obahlukileyo ukusuka ku-8 ukuya ku-63 ″
Amacandelo eRimiringi yokutshixa, iringi esecaleni, isihlalo seebhedi, isitshixo somqhubi kunye neflange kwiintlobo ezahlukeneyo zeerimu Thina HYWG ngomnye wabenzi abambalwa abanokuvelisa zombiniizixhobo zeerimunongqameko lugqityiwe. Ukusukela emva kwexesha kwee-1990's HYWG yaqala ukuvelisaamacandelo rimKwaye ibibonelela kwiinkokheli ze-OTR zehlabathi ezinje ngeTitan kunye neGKN. Namhlanje i-HYWG inoluhlu olupheleleyo lweamacandelo rim ukusuka kubungakanani 8 ″ ukuya kuma-63 ″, ukusuka kumacandelo e-OTR ukuya kwizinto zerim ze forklift, zonke amacandelo rim zi-100% ezenziwe endlwini, sinikezela ngomgangatho onokuthenjwa kunye nexabiso elifanelekileyo.
Inkqubo ye- umda we forklift Ihlanganiswe kunye namavili ukuthatha ubunzima obukhulu bezithuthi kunye nokuqengqeleka ngokukhawuleza kwiimeko ezahlukeneyo. Umda weforklift ibaluleke kakhulu kubomi be forklift kunye nokusebenza ngokukuko, kulungile umda we forklift inokuthwala ubunzima obukhulu kwaye incede ifolokhwe yokubaleka iqhubeke kakuhle nangokufanelekileyo. Kubaluleke kakhulu ukuba ifolokhwe ibe namandla, ithembeke kwaye kube lula ukuyinyusaumda we forklift. Imveliso yethu HYWGumda we forklift lukhetho olufanelekileyo kubanini beforklift kuba sinobungqina bekhwalithi, ixabiso elifanelekileyo kunye noluhlu olupheleleyo lweerim zefolk uninzi lweempawu. Singumvelisi we-OEM yamagama amakhulu afana neLinde kunye ne-BYD.